‘बाबुआमा नपाल्नेलाई सामाजिक सेवाबाट वञ्चित गरेका छौं’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘बाबुआमा नपाल्नेलाई सामाजिक सेवाबाट वञ्चित गरेका छौं’
मिङ्मा लामा, उपाध्यक्ष, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
८ भाद्र २०७५ १२ मिनेट पाठ
जनप्रतिनिधि भएपछि जनताले महसुस गर्ने केके काम गर्नुभयो?
निर्वाचित भएयता जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएका काममा ‘फोकस’ भएका छौं । मुख्य सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छौं । जनताले जे मागेका छन्, हामीले पनि त्यही विषयमा बढी चासो दिएका छौं । यो क्षेत्रको मुख्य समस्या नै सडक हो । जनप्रतिनिधि आएपछि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै सडकको स्तरोन्नति भएको छ।
स्थानीय कस्तो समस्या बोकेर आउँछन्?
स्थानीयका मुख्य समस्या नै सडक, खानेपानी र यातायातसँग नै जोडिएका छन् । उहाँहरू यस्तै समस्या बोकेर आउनुहुन्छ । स्थानीयको समस्या सकेसम्म हल गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं।
यस क्षेत्रमा संस्कृति र पर्यटन विकासका योजना केके छन्?
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा धेरै धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र छन् । त्यस्ता धेरै धार्मिक ठाउँलाई हामीले पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । दलचौकीको मनकामना मन्दिर, नल्लुको पाथीभरा मन्दिर, भारदेउको गुप्तेश्वरी गुफालगायतलाई हामीले केन्द्रमा राखेका छौं । यीबोहक भूकम्पमा परेका अन्य सम्पदाहरू पनि छन् । तिनलाई जोगाएर संरक्षण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्नेछ । अर्को कुरा, यो गाउँपालिका विशुद्ध तामाङ भाषाले नामकरण भएको हो । यसको प्रतीक निर्माण कार्य पनि अघि सारेका छौं । यसका साथै देवीदेवताको मूर्ति बनाउनका लागि एक करोड हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ।
यस क्षेत्रमा पर्यटकलाई कसरी आकर्षित पार्नुहुन्छ?
यो क्षेत्र अन्य गाउँपालिकाभन्दा भिन्न छ । यो क्षेत्र प्राकृतिक छ । हामीले भएका सम्भावना खोजेर तिनलाई मिलाउने मात्रै हो भने पनि त्यही हेर्नका लागि पर्यटक धेरै आउन सक्छन् । गाउँपालिकाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र पर्यटन पनि हो । चौंघरे, शंखु, दलचौकी, नल्लु, भारदेउलगायत क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि गाउँपालिका कस्सिएको छ । पर्यटनलाई नै केन्द्रमा राखेर दलचौकीमा भ्यूटावर निर्माण गर्ने, कोज्न्योसोम गाउँपालिकाभन्दा माथि डाँडामा शान्तिवाटिका निर्माण गर्ने, होमस्टे सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर अघि बढ्ने योजना पनि गाउँपालिकासँग छन्।
गाउँपालिकाभित्र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित पार्ने के योजना छ?
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका सबैजसो सडक कच्ची छन् । वर्षाका बेला सहर जोड्ने सडक बन्द हुन्छन् । यस्तो स्थितिलाई हल गर्नका लागि हामीले ठाउँठाउँमा एक्साभेटर र डोजर सञ्चालन गरेका छौं । बाटो बिग्रनासाथ तुरुन्त मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । सडक बिग्रिएका कारण यातायात सञ्चालन गर्न असहज हुने गरेको छ । बजेटले भ्याएसम्म हामीले यो वर्ष नै केही सडक कालोपत्रे गर्ने सोच बनाएका छौं । सडक व्यवस्थित पारेपछि मात्रै यातायात व्यवस्था सहज पार्न सकिन्छ।
यो वर्ष गाउँपालिकाले कुनकुन सडक विस्तार गर्दैछ?
सडक विस्तारबिना विकास सम्भव छैन । यो वर्ष चौंघरे, तीनभञ्ज्याङ, दलचोकीलगायत क्षेत्रका सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ।
तपाईंको क्षेत्रमा भूकम्पले ध्वस्त पारेका बस्ती र सम्पदा पुनर्निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ?
यो पनि अहिले गाउँपालिकाको मुख्य समस्या नै हो । अझै पनि दुई सयभन्दा बढी घरधुरी टहरामा छन् । बेलाबेलामा पुनर्निर्माणको समस्या लिएर स्थानीय आउने गर्नुहुन्छ । यो समस्या हल गर्नका लागि गाउँपालिकाले चासो दिएर लागेको छ।
गाउँपालिकाकाभित्र कस्ताकस्ता समस्या छन्?
जनतालाई सेवा दिने गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन । यो वर्ष भवन बनाउनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी र सडकको समस्या छ । निर्वाचित भएयता हामी यही समस्या हल गर्नतिर केन्द्रित भएका छौं । अर्को मुख्य समस्या भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हो । गाउँपालिका अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ।
तपाईंको गाउँपालिकाले यो आवमा कस्ता योजना अघि सारेको छ?
पहिलो योजना गाउँपालिकाको भवन निर्माण हो । योसँगै यातायात सुविधा, खानेपानीको बन्दोबस्त, पर्यटन विकास, शिक्षा र स्वास्थमा सुधारजस्ता कार्यक्रम छन् । यो वर्ष गाउँपालिकालाई १७ करोड बजेट आएको छ । त्यसबाहेक केन्द्रीय सरकारबाटै ५ लाख विशेष बजेट भनेर आएको छ । यो बजेटलाई हामीले जहाँ आवश्यकता छ, त्यहीँ खर्च गर्छौं । यसबाहेक गाउँपालिकाका सबै वडामा पुग्न सक्ने गरी सडक विस्तारको योजना अघि सारेका छौं।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि गाउँपालिकाले कस्तो अभ्यास थालेको छ?
हामी आउनुअघि यो क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको अवस्था निकै कमजोर थियो । अहिले धेरै सुधार भएको छ । म पनि शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएकी हुँ । शैक्षिक क्षेत्रमा आफूले संगालेका अनुभव गाउँपालिकामा प्रयोग गरेकी छु । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर एउटै बनाउने, वडा र जिल्लाभित्र रहेका सबै विद्यालयमा एकरूपता ल्याएर शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार्ने प्रयासमा छु । सामुदायिक विद्यालय पनि निजीजस्तै गुणस्तरीय हुन सक्दो रहेछ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन चाहन्छौं । हामीले त्यही ध्येयका साथ काम अघि बढाएका छौं । यसबाहेक हामीले निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं । अब हाम्रो गाउँपालिकाभित्र प्लस टुसम्म पढ्न कुनै शुल्क लाग्दैन।
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कत्तिको सजिलो रहेछ?
सजिलो र चुनौती दुवै छन् । जेहोस् हामी निर्वाचित भएपछि जनताले संघीयताको आभास गर्न पाएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कृषिलगायत क्षेत्रमा संघीय सरकारको बढी चासो छ । हामी पनि त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेका छौं । स्थानीयलाई जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आधुनिक कृषिका लागि सामुदायिक संस्था गठन गर्ने, एकल महिलाका लागि सहकारी दर्ता गर्नेजस्ता योजना हामीले लागू गरिसकेका छौं।
जेष्ठ नागरिक र बालबालिका लक्षित कस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन्?
हामीले अरूले भन्दा फरक योजना लागू गरिसकेका छौं । गाउँपालिकाभित्रका जेष्ठ नागरिकलाई नपाल्नेलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति ल्याएका छौं । बालबालिकाका लागि पार्क निर्माण गर्ने र खेलमैदान निर्माणजस्ता कार्यक्रम पनि हामीले अघि बढाइसकेका छौं । बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम र जेष्ठ नागरिकका लागि चौतारा बनाउने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं।
गाउँपालिकाले हालसम्म केके काम गरेको छ?
शैक्षिक क्षेत्र सुधार, सुशासन, पारिवारिक बेमेलका समस्या हल, कृषिको आधुनिकीकरण, ग्रामीण सडक विस्तार, वृद्धवृद्धाका समस्या हल, खानेपानीको प्रबन्ध, पर्यटकीय क्षेत्र विकास, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता कार्य भइसकेका छन्।
विकास निर्माणमा जनसहभागिता कस्तो छ?
जनसहभागिता उत्साहजनक नै छ । जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । उनीहरू विकास निर्माणका कार्यमा हातेमालो गरेका छन्।
आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सपना देख्नुभएको छ?
सुविधायुक्त, जनमुखी र हराभरा गाउँपालिका बनाउने धोको छ । जनताले खास दुःख पाएको समस्या हामीले हल गर्नैपर्छ । करिबकरिब डेढ वर्षको समय सकिएको छ । अबको बाँकी समय विकास निर्माणका कार्यमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले कस्ता योजना अघि सारेको छ?
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा प्रायःका घरमा कम्तीमा पनि ५ वटासम्म भैंसी छन् । धेरै कृषकले भैंसीपालन व्यवसायलाई अंगाल्नुभएको छ । त्यसलाई लक्षित गरेर पशुपक्षी विकास कार्यक्रम, उन्नत घाँस उत्पादन, कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, बीउ वितरणजस्ता कार्यक्रम गाउँपालिकाले ल्याएको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ११:२८ शुक्रबार
जनप्रतिनिधि मिङ्मा_लामा कोन्ज्योसोम_गाउँपालिका